Momba anay - Jiangsu Mole ELectronic Technology Co., Ltd.
ARAHABAINA NY MOLE MEDIKA
Manaraka ny "siansa sy ny teknolojia no hery famokarana voalohany", Mole Medical dia manana ivon-toerana R&D roa any Xuzhou, Shenzhen, manam-pahaizana momba ny klinika maherin'ny 50 miavaka R&D, andrim-pikarohana siantifika ary oniversite ambony manerantany mba hanome vahaolana vaovao mifototra amin'ny klinika filàna sy valiny, toy ny Hopitaly Jeneraly PLA Jeneraly, University of Aeronautics and Astronautics Nanjing, University of Mining and Technology, University of Xuzhou Medical University.
Mole Medical no manana ny laboratoara asepsis kilasy 100,000 lehibe indrindra, atrikasa famokarana, laboratoara famokarana ao an-tanànan'i Xuzhou. Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny fitantanana ny làlan-drivotra antsika dia manolotra Video Laryngoscope izahay (miaraka amin'ny lelan'ny fantsona, azo ampiasaina / azo ampiasaina), Video Stylet, laryngoscope Fiber optic, Bronchoscope malefaka (azo averina / azo ampiasaina), Video Otoscope sns.
Nandritra ny fahaizana an-taonany maro, dia matoky anay ny sasany amin'ireo marika sy orinasa malaza indrindra amin'ny sehatry ny matihanina. Mampiasa vola be amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana izahay ary manana ny patanty anay. Manome fitaovana hanohanana izahay, manara-maso ny satan'ny mpampiasa sy manatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Tongasoa eto amintsika hisafidy vokatra ao amin'ny tranonkalantsika, na hizara ny eritreritrao aminay, afaka manome anao santionany izahay. Raha mila fanampiana ianao mandritra ny fizahana ny safidintsika misimisy, azafady mifandraisa aminay azafady hifandray amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka. Ny mpiasanay dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny fitarihana ny mpanjifa, ary vonona hanampy foana izy ireo. Miantsena izao hamaly ny filanao rehetra!
Manana traikefa maoderina maherin'ny 20 taona isika. Avo ny kalitaon'ny famokarana. Manana traikefa amin'ny famokarana matihanina manan-karena izahay, hery ara-teknika matanjaka ary fitaovana fanodinana mandroso.
Vokatra avo lenta, vidiny mirary, zava-baovao ary ambany-tany.
Factory bebe kokoa
Tamin'ny faran'ny taona 2020, ny Mole Medical dia namidy tamin'ny kaontinanta 5 (firenena sy faritra misy an'i Etazonia, Kanada, Alemana, Korea atsimo, Emira Arabo Mitambatra, Afrika Atsimo sns.)